[OFISIALY] dr.fone - iOS Private Data gaoma: gaoma iPhone maharitra
dr.fone Toolkit - iOS Private Data gaoma
Hamafa mora foana ny Data manokana avy ny Device
Angon-drakitra ianao mifidy izay tianao hamafa.
Arovy ny tenanao
Famafàna ny mombamomba hiaro anao amin'ny maha-mpangalatra. dr.fone Toolkit - iOS Private Data gaoma no banjino ny fitaovana ho an'ny tahirin-kevitra sy manokana hamela anao hifidy zavatra mba ho voafafa mandrakizay.
Ny zava-drehetra dia Erasable
Photos, hafatra, fifandraisana, fanamarihana, Safari maripejy sy ny antso ny tantara dia eo amin'ny zavatra izay afaka vonoina. Data voafafa mampiasa izany iOS Private Data gaoma afaka ny tsy ho sitrana.
Hamafa iPhone: Scan, ary dia maneho ny angon-drakitra manokana maimaim-poana
Azonao ampiasaina ity iPhone gaoma ny scan ny fitaovana sy ny hanopy maso tsy miankina rehetra hita fanazavana tsirairay. Izany maimaim-poana.
Hamafa iPhone: Samy voafafa, ary efa misy ny fiainana manokana dia checkable
Tsy vitan'ny fanopazana maso sy ny tsy miankina famafàna efa misy tahirin-kevitra eo amin'ny fitaovana, fa koa ny mizaha ny recoverable manokana momba ny iPhone na iPad, ka hamafa azy mandrakizay ka tsy misy olona afaka mamantatra izany.
Hamafa iPhone: afaka hanala an'ilay fiteny maro samy hafa ny angon-drakitra manokana
Gaoma iPhone ity dia manome fahafahana anao hamafa angon-drakitra manokana toy ny sary, hafatra, fifandraisana, miantso ny tantara, fanamarihana, kalandrie, fampahatsiahivana sy Safari tsoratadidy.
Hamafa iPhone: 1 Click To hamafa na fifantenana rehetra namafa velively ny zavatra araka izay irinao
Azonao atao ny manamarin ny vokatra manontolo Notarafina sy hamafa ny angon-drakitra rehetra iray tsindry. Na azonao atao ny mamafa fantenana zavatra izay tsy te-hitandrina.
Hamafa iPhone: hanalana rehetra iPhone, iPad sy iPod mikasika
Tsy maninona ianao mampiasa ny farany iPhone 7, iPad Pro, na ny taloha 4 iPhone, iPad 1, io antontan-kevitra iPhone gaoma dia mifanaraka tanteraka amin'ny rehetra ohatra ny iPhone, iPad sy iPod mikasika.
Ity antontan-kevitra iPhone dia tanteraka gaoma namaky-rindrankajy ihany. Ary tsy mitandrina, manova na mandefa tahirin-kevitra misy eo amin'ny fitaovana. Mitondra manokana ny tahirin-kevitra sy kaonty zava-dehibe. Ianao foana no hany olona afaka mahazo azy io.
Hanalana Any Karazana Privacy eo Amin'ny iPhone / iPad
Inona no azonao hamafa avy amin'ny iPhone? Azonao ampiasaina ity mba hamafa manokana fitaovana vaovao amin'ny iPhone, anisan'izany ny sary, hafatra sy ny kofehy mifamatotra, fifandraisana, miantso ny tantara, fanamarihana, kalandrie, fampahatsiahivana sy Safari tsoratadidy.
3 dingana tsotra.
Voafafa antontan-kevitra dia lasa mandrakizay.
Hamafa mora foana tahirin-kevitra rehetra avy amin'ny fitaovana. Ary tsy misy olona afaka ve sitrana sy hijery ny angona.